Mogadishu Journal » Neymar JR oo ku sii dhowaanaya ku biirista kooxda Real Madrid
Neymar JR oo ku sii dhowaanaya ku biirista kooxda Real Madrid
Xiddiga kooxda Paris Saint-Germain Neymar JR ayaa lagu soo waramayaa inuu qarka u saaran yahay ku biirista kooxda Real Madrid, wuuna uga dhow yahay sidii hore.
Xiddiga heerka caalami ee dalka Brazil ayaa diiradda u saarnaa Los Blancos tan iyo waayihiisii kooxda Santos. Madaxweyne Florentino Perez ayaana diyaar u ah inuu lasoo saxiixdo laacibkii hore ee Barcelona.
Neymar ayaan haatan ku faraxsaneyn kooxda ka dhisan Parc des Princes, wuxuuna 25 sanno jirkaani doonayaa inuu ku laabto horyaalka La Liga.
Shabakadda Mi Otra Liga ayaa sheegeysa in uusan Neymar ku faraxsaneyn horyaalka Faransiiska maadaama uusan u arkin horyaal tartan xoogan leh. Wuxuuna doonayaa horyaal weyn oo uu markale ka ciyaaro.
Shabakadda Mi Otra Liga ayaana intaas ku dareysa in filashadii heshiiska uu Neymar ku imaanayo Santiago Bernabeu Stadium ay haatan ka dhow dahay sidii hore. Los Blansos ayaa sidoo kale dooneysa xiddiga Tottenham Harry Kane.
Kheyre oo la faray in xeerka baarlamaanka uu gaarsiiyo dowladda Imaaraadka